ओलीलाई २५ लाख बिगाे भराउने फैसला, यति गम्भीर छ कसुर — Sanchar Kendra
दाङ । जिल्ला अदालत काठमाण्डौले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य विमला ओलीलाई मानव बेचबिखन मुद्दामा २५ लाख बिगो भराउने फैसला गरेको छ । मानव बेचबिखन मुद्दाका मुख्य व्यक्ति एवम् तत्कालीन लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभामा दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उत्तरकुमार ओलीको मृत्यु भएकाले उहाँकी श्रीमती एवम् प्रदेश सभा सदस्य विमला ओलीलाई अदालतले बिगो भर्न आदेश दिएको हो ।
यता सर्वोच्च अदालतले चार न्यायाधीशहरूबारे आएको समाचारको खण्डन गरेको छ। शुक्रबार केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा संवैधानिक इजलासका चार जना न्यायाधीशले सुटुक्क प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गोप्य रूपमा भेटेको खबर आएको थियो।
समाचारमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सुनुवाइअघि न्यायाधीशहरू सपना मल्ल, हरिकृष्ण कार्की, मीरा खड्का र दीपक कार्कीले विभिन्न समयमा प्रधानमन्त्रीसँग गोप्य रूपमा भेटेको उल्लेख थियो।
यो खबर खण्डन गर्दै सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, ‘न्यायपालिकाको स्वच्छता र अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेगरी मिथ्यापूर्ण, भ्रामक, अतिरञ्जित, असत्य र कपोकल्पित समाचारम सम्प्रेषण हुनु दुखद र खेदजनक विषय हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अनावश्यक आशंका र भ्रम सिर्जना गर्ने गरी, सत्य र यथार्थ नबुझी समाचार प्रकाशन गर्नाले न्यायपालिकाप्रतिको विश्वसनीयता र आम नागरिकको यसप्रतिको आस्थामा खलल पुग्न जाने तथा त्यस प्रकारको कामबाट सम्पूर्ण प्रेस जगतप्रतिको विश्वसनीयतामा पनि आँच आउन सक्ने अवस्था रहन्छ। यसप्रकारका कार्यहरू पत्रकार आचारसंहिता र कानुन प्रतिकूल पनि हुनाले कानुनी दायरामा आउन सक्नेतर्फ सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्प्रेषित समाचारको भ्रममा नपर्न सबैमा अनुरोध छ।’
प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका भनिएका चार न्यायाधीशहरूमध्ये तीन जनाले पनि यो समाचारको खण्डन गरेका छन्। ‘यस्ता समाचारहरू कसरी आउँछन्? स्रोत चाहिने पनि रहेनछ। सोध्नु पनि नपर्ने रहेछ,’ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले भने, ‘म त कतै गएको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्ने समाचार आएको रहेछ। खै कसरी लेखेको हो? मैले उहाँलाई भेटेको छैन। मलाई बोलाइएको पनि छैन।’
त्यस्तै अर्का न्यायाधीश दीपक कार्कीले पनि यो तथ्यहीन समाचार आएकामा दुःख लागेको बताए। ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्ने समाचार पढ्यौं। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेकै छैन। हामी ४० वर्ष अदालतमा काम गरेका क्याडर न्यायाधीश हौं। आजसम्म हामीले गर्न नहुने काम गरेका छैनौं, न्यायाधीशको मर्यादामै बसेका छौं। यसरी बनाएको इमेज बिगार्न हामी नेता/प्रधानमन्त्री भेट्दै हिँड्दैनौं,’ कार्कीले भने।
न्यायाधीश मीरा खड्काले राजनीतिक दल र नेता वा प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरूसँगै आफूहरूको साइनो-सम्बन्ध नहुने भन्दै समाचारको खण्डन गरिन्। ‘प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्ने समाचार सुनेर म छक्क परेकी छु। यस्ता हुँदै नभएका समाचार कहाँबाट कसरी आउँछन्? कसरी लेख्छन् पत्रकारले?,’ खड्काले भनिन्।
यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको खुलेको छ ।
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘निर्णय फिर्ता लान मिल्दैन, यो कसरी गयो ?’ भनेर इजलासका कर्मचारीलाई प्रश्न गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नको इजलासका कर्मचारीहरूले जवाफ दिन सकेनन् ।
यता संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको संवैधानिक इजलासबाटै निरन्तर सुनुवाई हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दा सरकारपक्षका वकिलहरूको मागबमोजिम सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाटै निरुपण हुने भएको हो ।
सो सम्बन्धमा परेका एक दर्जनभन्दा बढी मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाटै टुङ्गो लगाउने गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणासहित पाँचजना न्यायाधीशको आजको संवैधानिक इजलासले आदेश जारी गरेको हो । माघ ४ गतेबाटै यो मुद्दाको निरन्तर सुनुवाई हुने सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
शुक्रवारको इजलासमा सरकार र रिट निवेदनका तर्फबाट बहस सकिएपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । यसअघि रिट निवेदकहरुले यो संसद विघटनको रिटलाई बृहत पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरेका थिए ।
वृहत् पूर्ण इजालस गठन गर्नुपर्ने मागलाई संवैधानिक इजालसले अस्वीकार गरेको हो । दुवै पक्षको बहस र एमिकस क्युरीको सुझाव सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसले यस्तो निर्णय सुनाएको हो।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलसमा गर्ने कि वृहत् पूर्ण इजालसमा लैजाने भन्‍ने विवादमा अल्झिएको थियो।
मुद्दाको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी प्रश्‍नमा प्रधानन्यायाधीश राणासहितको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पनि बहस भएको थियो। सरकारी पक्षबाट बहस भएपछि एमिकस क्युरीमा रहेका वकिलहरू वहसमा सहभागी भएका थिए। रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक व्याख्याको प्रश्‍न भएकोले वृहत् पूर्ण इजालसको माग राखेका थिए ।